Ukwenza ngcono ikhono lethu lokuqamba izinto ezintsha, i-GUODA izobamba iqhaza embukisweni oguquguqukayo kokubili kwasekhaya nangaphakathi. Inhloso eyinhloko ye-GUODA Inc. iya emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, besisebenza ngokubamba iqhaza emibonweni yomhlaba eminyakeni embalwa edlule. Ngethemba lokuthi amabhayisikili ethu amahle azobonakala, eSam ...
Ukulungiswa kweCanton Fair
Ngesonto eledlule uMnyango Wezokuthengisa waseGuoda Tianjin Inc. ubulungiselele imininingwane yokuqala ye-inthanethi Export Fair.Saya efektri yethu ukuyothatha imikhiqizo yokwethulwa kwamavidiyo.Ngaleso sikhathi, saqopha inqubo yokukhiqizwa kwemikhiqizo kanye nokuqoshwa kwezimoto eziningi ezintsha nezesekeli. lokho kuthathe ...
I-China Canton Fair: Isentha ye-GUODA Bike
Ngesonto eledlule uMnyango Wezokuthengisa waseGuoda Tianjin Inc. ubulungiselele imininingwane yokuqala ye-inthanethi Export Fair.Saya efektri yethu ukuyothatha imikhiqizo yokwethulwa kwamavidiyo.Ngaleso sikhathi, saqopha inqubo yokukhiqizwa kwemikhiqizo kanye nokuqoshwa kwezimoto eziningi zesampula nezinye izinsiza. nalokho ...
Hlola i-Market and Innovation GUODA Inc Njalo Esendleleni
Ukwenza ngcono ikhono lethu lokuqamba izinto ezintsha, i-GUODA izobamba iqhaza embukisweni oguquguqukayo kokubili kwasekhaya nangaphakathi. Inhloso eyinhloko ye-GUODA Inc. iya emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, besisebenza ngokubamba iqhaza emibonweni yomhlaba eminyakeni embalwa edlule. Sethemba ukuthi amabhayisikili ethu amahle kakhulu angahle abe ...
I-GUODA ithatha isibopho sazo zonke izidingo zemikhiqizo yamakhasimende
Muva nje, amabhayisikili wezingane e-GUODA asethengisweni elishisayo eningizimu-mpumalanga ye-Asia. Amaklayenti amaningi akhetha uhla olukhulu lwemikhiqizo yethu, njengebhayisikili lebhalansi yezingane, ibhayisikili lezintaba lezingane kanye nebhayisikili lezingane ezinamasondo okuqeqesha, ikakhulukazi amabhayisikili amathathu. Amakhasimende ethu amaningi, akhetha ukukhetha okwehlukile ...
Uyemukelwa ku-GUODA (Tianjin) Inkampani Yesayensi Nobuchwepheshe Yokuthuthukiswa Kwezinkampani! Kusukela ngo-2007, sizibophezele ukuvula imboni yobuchwepheshe bokukhiqiza amabhayisikili kagesi. Ngo-2014, i-GUODA yasungulwa ngokusemthethweni futhi itholakala eTianjin, okuyiyona enkulu kunazo zonke ...
Izindaba Ezinhle — Izingxenye Zebhayisekili Ziyathengiswa
Sivula iwebhu ukuze sibonise inkampani yethu futhi sikulethele imikhiqizo yethu, ibhayisikili, ibhayisikili kagesi kanye no-tricycle, isithuthuthu sikagesi kanye ne-scooter, izingane zebhayisikili nezinto zezingane. Ngo-2020, imakethe yamabhayisikili iyakhula. Ngokwesidingo semakethe, saqala nokuthengisa izingxenye. Nikeza ngezifiso ...
Sikubonise umugqa wethu womkhiqizo ——E ibhayisikili
Njengenkampani eya kumkhiqizo we-e-bike, ukulawula ikhwalithi kubaluleke kakhulu. Okokuqala, abasebenzi bethu bahlola ozimele bamabhayisikili kagesi abethuliwe. Ngemuva kwalokho vumela ifreyimu yebhayisikili kagesi eshiselwe kahle imiswe ngokuqinile esisekelweni esijikelezayo ebhentshini lomsebenzi okugcotshwa kuwo wonke amalunga. ...